H&M နဲ့ collaboration လုပ်တော့မယ့် Moschino – FemaleWear.net
Italian luxury fashion brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Moschino နဲ့ collaboration လုပ်တော့မယ့်အကြောင်းကို H&M ကနေကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Moschino ရဲ့ creative director တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jeremy Scott ကလည်း 11th annual party မှာ ကြေငြာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီသတင်းကို အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြမယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ Jeremy Scott ကတော့ ” ဒီ collaboration ကိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ သူ့ဘဝမှာ တခြား fashion တွေနဲ့လည်း collaboration လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး သူ့ရဲ့ fan တွေဆီကို နောက်ထပ်များစွာသော fashion အသစ်တွေ ရောက်ရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Scott ဟာ ကမ္ဘာကျော် Brand များစွာနဲ့ collaboration လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး Swedish high street brand တွေအပါအဝင် Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Alexander Wang, Balmain, Versace Erdem, Marni တို့နဲ့လည်း ပူးပေါင်းပြီး Fashion ဒီဇိုင်းအသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
?⭐?? @itsjeremyscott @gigihadid @iamcardib #moschino #hmoschino #gigihadid #jeremyscott #cardib #coachella @absolutvodka_us
Moschino Coachella ??? @slickwoods #slickwoods photo @ronyalwin #moschino @itsjeremyscott
??? Had so much fun celebrating the announcement of my friend @itsjeremyscott’s @moschino collaboration with @hm this weekend in the desert !! ????? captured by our epic friend @ronyalwin ?